Mamnuucidda Tuugsiga oo La Diiday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mamnuucidda Tuugsiga oo La Diiday
Uppdaterat onsdag 27 april 2011 kl 15.15
Publicerat onsdag 27 april 2011 kl 14.57
Haydda maamulka gobolka Västmanland ayaa go’aan ku gaartay in dib looga noqdo mamnuucidda yaboohsiga, kadib eegid ay hayaddu dib u eegtay go’aan uu horay u gaaray maamulka Sala oo ka tirsan gobolka Västmanland.
Maadaama bayna hayad-goboleedku ku macneeysay go’aankaa in mamnuucidda ay deggmo ee ammaankeeda howlaha yabooha la xiiraa aan lagu matali karin ammaanka xeerarka ammaanka.
Maamulka degmada Sala ayaa toddobaadkii ina dhaafay go’aamiyay in la mamnuuco tuugsiga goobaha bulshada, si bayna ku macneeyeen looga hor-tago dembiyada ku dhuumaaleeysan kara falalka yabooha, sida ka ganacsiga oogada bani’aadamka.
Maamulka gobolka ayaa haddaba sheegay in mamnuucid noocaasiya ay meel kaga dhacayso xoriyadda guud ee ruuxa, iyo in aanay ahayn tallaabo loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si loo sugo ammaanka goobaha bulshada.
Degmada Sala oo mamnuucdey tuugsiga
torsdag 21 april 2011 kl 09.45